Umhlahlandlela ophelele we-American Pit Bull Terrier - Izinhlobo
I- I-American Pit Bull Terrier (I-APBT, iPittie, noma iPitty) i-purebred eye yakhuthazelela okuningi kuwo wonke umlando wayo.
Kusukela ekubandlululweni kuya ekuhlukunyezweni ngokulwa nenja, lolu hlobo lungaba nedumela eliyingozi kepha i-APBT ayiqondakali kahle.
Ngokuphambene nalokho, iPit Bull iyisibonelo esihle kakhulu, iqinile futhi inemisipha ngobubanzi obuningi bezici zobuntu ezifiselekayo ezenza kube lusizo emsebenzini futhi njengenja yomndeni.
Sekuyisikhathi sokuphinda wethule iPit Bull futhi ubonise ngobuhle bangempela balolu hlobo. Sikufake konke odinga ukukwazi!
Yini i-American Pit Bull Terrier?
Ungayiqeqesha kanjani iPull Bull
Iqiniso elijabulisayo: AmaPitt ayakuthanda ukuhlafuna.
Izinkinga ezikhona zezempilo ze-American Pit Bull Terrier
Ukunikeza uPitty wakho ukudla okufanele
Izindleko zokuba ne-Pit Bull
Ukuthola abalimi abahle kakhulu be-Pit Bull
Isiphetho: Ingabe i-American Pit Bull Terrier yakho?
Ukufunda ngemvelaphi ye-American Pit Bull Terrier, sidinga ukubuyela emuva emuva ngekhulu le-19 leminyaka eNgilandi.
Inkunzi kanye nebhere yokuloba kukhona ezemidlalo zegazi okubandakanya ukubeka izinja phezu kwenkunzi ebanjiwe noma ibhere ukuzijabulisa. AmaNgisi aqala ukuzala umugqa wezinja ezinamandla, izimfanelo zezemidlalo kulo msebenzi, yingakho kuzalwa i- Izinhlobo zeBull neTerrier.
Ngo-1835 le midlalo kwathiwa ayikho emthethweni ngenxa yobuntu bayo obungenabuntu. Ngeshwa, lokhu kwaveza obunye ububi obubi: ukulwa nenja.
Ukulwa kwezinja bekungashintsha unomphela inkambo yomlando wohlobo futhi hhayi kube ngcono.
Abantu ababandakanyeka ekulweni nezinja baqala ukwethula izakhi zofuzo ezintsha kumxube weBully ukudala umugqa wezinja ezazinolaka kakhulu.
Ngokuthakazelisayo ngokwanele, balwela ukudala uhlobo olwalukhona ulaka kuphela ezinjeni kepha ayizange ilume abaphathi abangabantu. I-American Pit Bull Terrier inayo le mfanelo futhi inemvelo ukungafuni ukuhlasela abantu.
Kusukela ekulweni kwezinja kuya ezinjeni zomzanyana
Ngenkathi abokufika beqala ukuletha lezi zinhlobo zeTerrier ezimi kahle ngokomzimba futhi zivikele e-US, bajabulela izimpilo ezintsha kude negazi nokubulawa kwezindandatho zokulwa nezinja.
Lezi zinja eziguquguqukayo zazikhona ubukhali, uyashesha, uqine futhi uqaphile. Futhi babengabafundi abasheshayo ababelangazelela ukujabulisa.
Ama-terriers asetshenziswe ngokuyinhloko njenge- izinja zasepulazini , noma ngabe babehamba nabanikazi lapho beyozingela noma begade imfuyo nempahla. Zasetshenziswa futhi njenge izinja zomzanyana , ngenxa yesimo sabo esimnene ezinganeni.
Uhlobo olusha lweBull Dog lwakhiwa ngalezi zifo zegazi zeTerrier, futhi lwalulukhulu kunezinhlobo zokuqala zamaNgisi. Yaqanjwa ngokuthi i- I-American Pit Bull Terrier , ethola umehluko ovela e-UKC ngo-1898.
I-AKC nayo izogcina izibonile izinhlobo zayo, kodwa hhayi ngaphandle kokudideka.
Ukungaqondi okukhulu ngePit Bulls
Kwaze kwaba ngawo-1930 lapho i-AKC yaqaphela khona i-American Pit Bull Terrier njenge-purebred.
Manje, kulapho kudideka khona. Lapho lolu hlobo seluthole ekugcineni, i-AKC yashintsha igama layo yaba yi-American Pit Bull Terrier yaba ngu I-American Staffordshire Terrier (Ubuningi).
Bakwenze lokhu uku nqamula umlando wokulwa kwezinja kusukela ekudumiseni kohlobo. Ngokuhamba kwesikhathi, izinja ezibhaliswe njenge-American Staffordshire Terriers zazalaniswa ngokusho kwe okujwayelekile , ukugcina izici ezithile ezakwenza kwehluka.
Ngokuqondene nezinja ezingabhaliswanga noma ezingafakwanga ezingeni, zaba yigazi eliqhubekayo le-American Pit Bull Terrier yanamuhla.
I-American Pit Bull Terrier vs American Staffy: ingabe ziyefana?
Selokhu i-AKC yenze ushintsho lwamagama emlandweni, umbuzo owodwa osalokhu uqhubeka udida abathandi bezinja.
Ingabe i-American Pit Bull Terrier kanye ne I-American Staffordshire Terrier izinhlobo ezimbili ezihlukene noma ziyinja efanayo?
Abanye bazophikisa ukuthi bayafana, kepha kukhona labo abathi iStaffy sincane ngosayizi futhi, ngokuphelele, sihluke ngokuphelele ngezindlela.
Nayi eminye umehluko omkhulu omenyezelwe phakathi kwezinhlobo ezi-2:
I-Staffy ifakwa ukuze isetshenziswe njenge- bonisa inja , kuyilapho iPittie ingabhekwa njengombukiso.
Ukwakhiwa komzimba kukaStaffy mfushane, isitokisi futhi inzima .
Zombili izinhlobo zithathwa njenge- izinja zomndeni ezinhle kakhulu ngokuziphatha okuhle. Uma kukhulunywa ngokuthi iyiphi eyakho, konke lokho kuncike kokuthandayo.
Ngabe ufuna ukutshala imali enjeni ezobamba iqhaza emincintiswaneni? Uma kunjalo, khona-ke iStaffy kungenzeka ukuthi ikhethe kangcono.
Kepha, uma ufuna nje inja engumngane ongasoze wakudedela, i-APBT yindlela okufanele uhambe ngayo.
Amaqiniso asheshayo we-American Pit Bull Terrier
Ake singene kwamanye ama-factoid athakazelisayo futhi afundisayo ngePittie!
Ngenxa yedumela likaPittie njengenja eyingozi, kungaba njalo kuvinjelwe emadolobheni athile noma ezifundazweni (njenge Umalusi waseJalimane kanye ne- Ikhoyili ). Uma ungumnikazi wePittie futhi uhlela ukuhamba, qiniseka ukuthi uyazi ukuthi imithetho ikuphi lapho uya khona.
I- isiko lenja yomzanyana empeleni imelwe yi-American Pit Bull Terrier. Vele ubuze lezi zinkunzi ezidumile ze-Pit Bulls: Petey , kusuka kumbukiso wakudala ama-Little Rascals, Induku , iBuster Brown mascot mascot, futhi Umthumeli , inja ye-RCA.
Ngesikhathi se-WW1, amaphosta we-propaganda asebenzise izinhlobo ezahlukahlukene zezinja ukumela izwe ngalinye elibandakanyekayo. I-US ikhethe i-American Pit Bull Terrier ngenxa yayo isibindi nokwethembeka.
Izinkunzi Zomgodi ungenayo imihlathi yokukhiya. AKUKHO mshini ophathekayo owenza umsebenzi 'wokukhiya'. Lo mbono oyiphutha wengeza ngokungenabulungisa idumela labo njengenja enobudlova.
Ukwakhiwa ngokomzimba kwe-American Pit Bull Terrier kungafaniswa nokwedume kabi UDavid isithombe sikaMichelangelo. Ngempela ukuphelela kwemisipha.
Uma ngabe kwakukhona inja eguquguqukayo ngokomzimba, iPit Bull iyona. Imfushane futhi inesitoko, ifinyelela ubude be- Amasentimitha angama-21 (53 cm) futhi unesisindo esifinyelela ku Ama-85 lbs (38 kg).
Imisipha iyashwabana ngaphansi kwengubo ekhazimulayo nge imilenze emifushane nomzimba omncane lokho kuyashesha ngendlela emangalisayo futhi kushesha. Inhloko ibanzi imihlathi emikhulu ethanda ukusabisa.
Ijazi le-American Pit Bull Terrier linjalo hhayi i-hypoallergenic , kepha kuyachitheka okuphansi . Ijazi lidinga ukunakekelwa okuncane. Ukuhlikihlwa okukodwa ngesonto kwanele ukugcina ijazi lakhe liphilile.
Ingubo emfushane enezinwele ingeza ngephalethi enemibala emihle, kufaka phakathi okuluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omnyama, omhlophe, nowebrindle.
Amehlo abanzi wePitty mahle ngokukhethekile. Akukona nje kuphela ukuthi kungaba yimibala emangalisa ephuzi, empunga, eluhlaza, ensundu noma eluhlaza okwesibhakabhaka kodwa kukhipha imfudumalo nothando.
Ufuna ukubona leyo misipha isebenza? Bheka le vidiyo ekhombisa iPit Bull eqa udonga:
Izindlebe ze-American Pit Bull Terrier: zisikiwe noma azisikiwe?
I-American Pit Bull Terrier enezindlebe ezingagundile iba yindawo evame kakhulu njengokuhlehlela emuva ekunqobeni izindlebe kwezinja. Ngokwemvelo, izindlebe zigoqeka ezinhlangothini zekhanda futhi ziyivevethi ekuthinteni.
I- ukuzala okujwayelekile kubiza i-American Pit Bull Terrier enezindlebe ezinqunyiwe, okuba umphumela lapho ichopho lendlebe elingaphandle likhona ngokuhlinzwa isuswe ukunikeza inja izindlebe ezihlikihliwe, ezifana nezempisi.
Lo mkhuba ayisebenzi ngaphandle kokwenza inja ijabulise amajaji ezinhlelweni zezinja.
Noma kunjalo, ungathola ama-Pit Bulls anezindlebe ezinqunyiwe noma ezingasikiwe, njengoba eyokugcina nayo ithandwa ngalolu hlobo.
Imihlathi enamandla enamandla okuluma angama-235 PSI
Esinye sezici ezihlukanisayo zePit Bull imihlathi eqinile . Bathanda ukuhlafuna, futhi, uma betshelwa ngesikhathi somdlalo wokudonsisana ngethoyizi, bazoluma futhi babambe ngokuzimisela okukhulu.
Inamandla kangakanani i-Pit Bull bite? Ake sikuqhathanise nezinye izinhlobo zezinja eziqinile ukuthola umbono.
I-American Pit Bull Terrier vs i-American Bulldog
I-American Bulldog ngolunye uhlobo olunokwakhiwa kwemisipha, ikhanda elikhulu nemihlathi ebanzi. Inokuluma okunamandla ku- 305 PSI.
Ihlanganyela umlando ofanayo nePit Bull, ngemvelaphi yayo yokuzala eNgilandi. Yazalelwa ukuzingela nokuqoqa izilwane, ngakho-ke inamandla futhi iyashesha.
Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinhlobo yikho okubashukumisayo ukuthi babonise amandla abo amakhulu. IPit Bull iyinhlobo engokomzwelo, hhayi enobudlova ngokwemvelo kubantu. IBulldog, yize iwuthanda umndeni wayo, ingaba njalo okungaqondakali ebhekise kubantu ayazi.
Uma kuqhathaniswa amandla alezi zinja ezimbili, iBulldog iyona enqobayo ngenxa yamandla okuluma aphezulu kanye nokungaqiniseki kwayo.
I-American Pit Bull Terrier vs Boxer
I- Isibhakela inja ingemuva nje kwePit Bull ngamandla okuluma we 230 PSI.
Le nja yinde futhi inamakhanda, okwenza kube yi-jumper engakholeki. Inezinga lamandla eliphezulu futhi idinga ukuzivocavoca umzimba njalo.
Abashayisibhakela nabo izinja ezinhle zomndeni , inothando kakhulu futhi imnandi. Abahlanganyeli ngokulwa okufanayo noma ukugada inja yePitty.
Noma lezi zinhlobo ezimbili zinamandla acishe afane okuluma, ngenxa yefa lePit Bull, ukuncintisana kanye nemvelo yokuvikela, kuphephile ukusho ukuthi inganqoba iBoxer.
I-American Pit Bull Terrier vs Rottweiler
Abanamandla Rottweiler amandla okuluma 328 PSI . Lo mdlwane ungamandla okufanele abhekwe nawo uma kukhulunywa ngamandla, ubungqabavu, nokukhuthazela.
Kukhuliswe njenge- inja esebenzayo , iRottweiler kulula ukuyiqeqesha futhi ihlakaniphe kakhulu. Ngokomzimba, ngumshini!
Uma kuqhathaniswa nePit Bull iRottweiler inomphetho uma kukhulunywa ngakho konke amandla futhi amandla.
I-American Pit Bull Terrier vs Umalusi waseJalimane
I- Umalusi waseJalimane (GSD) ine 238 PSI , engekude kakhulu ne-Pit Bull.
Lezi zinhlobo ezimbili zihluke kakhulu ngokubukeka, kodwa zombili zabelana ngedumela elingalungile lokuba yingozi. Abelusi baseJalimane nabo bavame ukutholakala kuhlu lokuvinjelwa futhi banokuningi ukuvikela isimilo.
I-GSD ingenye ye- inja ehlakaniphile kakhulu izala emhlabeni. Kungukukhetha okuthandwa ngumsebenzi wamaphoyisa, wezempi nowokwelapha. Ukuqeqeshwa kuza kalula kule pooch esebenza kahle kakhulu, futhi akumangazi ukuthi i-GSD iyimbangi ephezulu embukisweni wezinja.
Lapho uqhathanisa amandla, lezi zinhlobo ezimbili zifinyelela ekudwebeni okulinganayo. Ngenkathi amandla okuluma efana nawo, i-GSD injalo okusheshayo nokushesha . Lokho kuhlakanipha okuphezulu akulimazi nakho.
Ngakolunye uhlangothi, iPit Bull inemisipha futhi izimisele, idrayivu yokungalilahli ithemba.
I-American Pit Bull Terrier yasheshe yazitholela idumela elithi 'badass' eringini lokulwa nezinja. Maye, lesi sikhathi esibi sokuzilibazisa sihlupha lolu hlobo, ngisho nakulesi sikhathi esiphila kuso.
Iqiniso liwukuthi, izakhi zofuzo zePittie zikhethwe ngokucophelela ukudala umgadli owaziwayo, kepha esisekelweni sokwakheka kwezakhi zofuzo kwasekuqaleni umphefumulo omnene .
American Pit Bull Terriers kukhona uhlakaniphe kakhulu futhi ngifisa ukujabulisa. Bathola okwabo amakhono ezemidlalo, ukuzimisela nesibindi kusukela ezinsukwini zokuluma kwenkunzi.
Ziyakwazi ukuncintisana futhi kulula ukuziqeqesha. Lokhu kwenza ukuzala kuvelele uma kukhulunywa ngemincintiswano yezinja.
Masingakhohlwa isikhathi lapho lezi zinja zazibizwa ngezinja zomzanyana, ngenxa yazo uthando lwemvelo ezinganeni . Ama-Pit Bulls athembeke ngokweqile futhi ayavikela umndeni. Uma kushiywe yedwa isikhathi eside, ukukhathazeka ngokwehlukana izosetha.
Njenganoma yiluphi uhlobo lwenja, ukuqinisekisa ukuthi injana yePit Bull iyakhula ukubonisa izici nokuziphatha okuhle kakhulu, ukuzibandakanya kusenesikhathi nokuqeqeshwa kokulalela kuyimpoqo.
Isexwayiso: Lolu hlobo aluwona wonke umuntu!
Udinga ukuzimisela ukutshala imali isikhathi, imali namandla ukunakekela i-Pit Bull. Le akuyona inja yakho etholakala kalula enethanga ongayifaka esikhwameni sakho noma nini lapho uzizwa uthanda khona!
IPit Bull izinikele ngo-100% emndenini wayo, inesifiso esinamandla sokuvikela. Kepha angahle athathe lowo mthwalo ekholelwa ukuthi nguye umholi wepakethe.
Njengenkosi, udinga khombisa ukuthi nguwe ophethe . Lokhu kusho ukuqondisa nokulungisa ngesandla esiqinile, esisekelwa ukuqiniswa okuhle.
Ukuqeqesha kudinga ukungaguquguquki , isikhathi. Le ukuphela kwendlela ozonqoba ngayo inkani ewuphawu lohlobo.
Inkani ehambisana nePitty's ubuhlakani nokuzimisela yenze idlanzana uma ingaqeqeshiwe kahle. Lokhu kuziphatha kungaqhamuka kusabisa noma kuyingozi, ikakhulukazi uma kuvela enjeni ekhanga ngokomzimba.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi lezi yizici izinhlobo eziningi zezinja ezijwayele ukuzibonisa. Ungavumeli ukubukeka, umlando, nezinganekwane ezingaqinisekisiwe kuphazamise umbono wakho jikelele ngalolu hlobo.
Izindlela ezi-3 ezinhle kakhulu zokuqeqeshwa kwama-APBTs
Khumbula ukuthi ukuqeqeshwa kudinga ukungathí sina nge-Pit Bull. Ungahle ufune ukuqasha i- umqeqeshi wezinja ochwepheshe ukuphatha umsebenzi. Uma uhlela ukuthatha izintambo, lokhu kucacisiwe izindlela zokuqeqesha izokhipha okuhle kakhulu ku-Pitty yakho.
1. Ukuxhumana nabantu kusenesikhathi
Lokhu kufanele kube yisisekelo sanoma imuphi umbuso wokuqeqesha izinja kungakhathalekile ukuthi hlobo luni. Ukukhipha umdlwane wakho nokuzihlanganisa nawo ezinye izingane, abadala, nezinja kuzomenza angabi mncane kakhulu futhi abe namahloni njengoba ekhula.
Uma unezinye izinja, vumela umdlwane wakho omusha uzihlangabeze futhi udlale ngaphandle.
Lokho kusho, uhlobo lwePit Bull lwenza kahle kakhulu ku- indlu enegceke elibiyelwe . Ifulethi elincanyana nje alinikezi isikhala esanele sokuganga nokuhlola.
Khulisa indawo yangakini ipaki yenja futhi uthathe uPitty wakho lapho ngezimpelasonto ukuze ajwayele ukubona nokuhogela ubuso obusha. Qala ngokumgcina e-leash futhi umvumele ukuba asondele futhi anuke izinja ezinobungane.
Ungavumeli Pit yakho Bull off the leash epaki inja. Uma kwenzeka kuqubuka impi yenja, ukuzimisela kwakhe kuzomenza alwe kuze kube sekugcineni. Lolu hlobo ngeke luhlehlele emuva lapho lucasulwa.
I-American Pit Bull Terrier ngakwesokudla ( umthombo )
Ngenxa yomlando wabo nokulwa kwezinja, amaPit Bulls anokuthambekela kwemvelo koku khombisa ukuhlukumeza ezinye izinja .
Yebo, ukuzihlanganisa nabantu kuyisihluthulelo sokumxhaxha, kepha ukuqeqeshwa kokulalela kuzomnika ukuzethemba nokuziphatha okufanele akwenze ngokuthembela kuwe.
Njengoba kushiwo ngaphambili, iPit Bulls bayathanda ukulandela imiyalo futhi bane- amathani wamandla .
Ukumatanisa ukuqeqeshwa kokulalela ukuqeqeshwa kwe-agility akuyona nje indlela enhle yokuba nobabili nibe nezibopho, kodwa izomgcina evuselelekile, isize ishise amandla, futhi imfundise ukubheka kini lapho emthatha ngokulandelayo.
Ngenxa yamandla e-American Pit Bull Terrier, ukulungiswa kwe-leash kanye nokujeziswa kuvame ukubanjwa ngokuqeqeshwa kokulalela, kepha akusebenzi ngaso sonke isikhathi yalolu hlobo.
Zama ukusebenzisa ukuqeqeshwa kokuchofoza noma imivuzo ukugqugquzela iPit Bull yakho ngokucindezela okuhle.
3. ICanine Certified Citizen Certification
Lolu hlelo nesitifiketi lwakhiwa yi-AKC. Izinja zivivinywa ngamakhono amaningi ukukala ukulalela nesimo sengqondo. Uma inja ingafakazela ukuthi inekhono ngalinye, izothola isitifiketi seCanine Good Citizen.
Vele, noma iyiphi inja ingaya kulolu hlelo, kepha ngiyisho ngoba ingasiza kakhulu iPit Bulls.
Ngokuya ngokuthi uhlala kuphi, kungaba nzima ukuqasha indlu ngenxa yomthetho noma umninindlu angahle anqikaze ngenxa yesithunzi sohlobo. Ukwethula lesi sitifiketi kukhombisa ukuthi inja yakho idlule ekuqeqeshweni nasekuhlolweni ukusungula ukuziphatha okuhle .
Ukuqedela izinhlelo ezinjengalezi kungenye futhi indlela yokuqeda isinja esibi sePittie.
Ungathola abahloli bohlelo lwe-AKC lapha .
Izinga lamandla alolu hlobo liphezulu lapho, likushiya nomdlwane owonakalisayo uma engalungiswanga ukuzivocavoca umzimba. Futhi uthanda ukuhlafuna , ngakho-ke kungcono uqiniseke ukuthi uwasebenzisa wonke la mandla, akuvumele ukuthi awuphendulele ezicathulweni nasefenisha yakho.
Lindela ukunikela okungenani ihora elilodwa ngosuku ukudlala isikhathi. Kunezindlela eziningi ongathola ngazo ubuciko ngePit Bull yakho.
Thatha uhambo lokuzungeza indawo yangakini.
Iya ekugijimeni umzila wepaki.
Sebenzela ukuhlangana nabantu futhi ujabule ngokuhlekisa epaki yezinja.
Gcina ukukhethwa kwamathoyizi wekhwalithi asesandleni izinsuku zezimvula. I-Pit Bulls iyathanda ukuhlafuna!
Setha i inkambo yezithiyo egcekeni lokuzijwayeza ukuzivocavoca.
Lolu uhlobo oluqinile nxazonke olunempilo enhle. IPit Bull inobude obude besikhathi sokuphila e Iminyaka engu-12 kuya kwengu-16 .
Azikho izinhlobo zezinja ezingavikelekile ezifweni ezimbalwa ezijwayelekile zofuzo, kanti iPit Bull ayihlukile.
Nazi izingqinamba eziphezulu zezempilo zase-American Pit Bull Terrier okufanele wazi ngazo.
I-Hypothyroidism: Lesi sifo sihlasela i-thyroid lapho i-hormone ethile ingakhiqizi ngokwanele. Uma uqaphela ukuba buthakathaka kwengqondo, ukudinwa, ukungabekezelelani, nokukhuluphala ePittie yakho, shayela udokotela wezilwane ukuthi akuhlole.
Ukungezwani komzimba: Ama-Pit Bulls athanda ukwenza ukungezwani kwesikhumba okubashiya benamachashazi esikhumba esomile, esilumayo. Ngenhlanhla, kunezindlela zokwelashwa eziningana zemvelo nezinqunyiwe ongazizama. Vele ukhulume nodokotela wezilwane wakho ukuthola isisombululo esihle kakhulu senja yakho.,
Isifo senhliziyo: Kwi-American Pit Bull Terrier lokhu kungaba ngesimo se-valve malformations, irregularities, and congenital heart defects.
I-Hip Dysplasia: Lesi yisifo sezakhi zofuzo esidala ukukhula okungajwayelekile kanye nokukhubazeka kwamalunga we-hip. I-hip dysplasia kubuhlungu ngendlela exakile, ekugcineni kuholele ekulahlekelweni ukuhamba nokuxhwala.
Ukukhuluphala ngokweqile kuyisici ozofuna ukusibheka lapho ukhetha ukudla kwe-American Pit Bull Terrier.
Khetha ukoma kwekhwalithi ephezulu ukudla kwenja lokho kwehlukaniswe phakathi ukudla kabili ngosuku . Ngama-Pit Bulls, kunconywa ukuthi ungasebenzisi okungaphezulu kwe- 1.5 kuya 2.5 izinkomishi ukudla nsuku zonke.
Njengoba ukungezwani komzimba nesikhumba kuyinkinga ejwayelekile yalolu hlobo, khuluma nodokotela wezilwane wakho ngokudla okufanele ukukugweme nokunye ukudla okungasiza ngempela ukuthuthukisa isimo.
Ikhala Elibomvu Pitbull
Uma uthanda lolu hlobo futhi ufuna ukungena kuwo wonke umdlwane wePit Bull, lungela ukukhipha inhlama ebucayi.
I-purebred Pit Bull puppy enamagazi aphezulu izobiza noma kuphi kusuka $ 2000 kuya ku- $ 20,000 . Izinhlobo ezithile zePittie, njenge I-Blue Nose Pitbull futhi a Ikhala Elibomvu Pitbull , ingabuye ibize ngaphezulu.
Imidlwane yePittie enama-bloodline alinganiselayo isabiza kakhulu, kanti abafuyi bayashaja $ 800 kuya ku- $ 1000 ngomdlwane ngamunye.
Lokho nje kuyisiqalo. Lapho usuthengile umdlwane wakho, sekuyisikhathi sokuthenga izinto, uthole udokotela wezilwane, wenze ukwelashwa kwenziwe, futhi ucabange ngokuqeqeshwa.
Ake sihlukanise izindleko zonyaka.
Bhalisa namathegi: Buza izwe lakho ukubona ukuthi ngabe iPit Bull yakho idinga amathegi akhethekile noma idinga ukubhaliswa. Lokhu kungabiza cishe u- $ 50.
Izivivinyo Zonyaka Zokwelapha: $ 250
Umshuwalense Wezempilo Yezilwane: $ 225
Ukuchitha noma ukungathathi hlangothi: $ 200
Amagiya namathoyizi: $ 300
Ukudla: $ 120
Sicela ukhumbule ukuthi lokhu kungukulinganisa nje! Izindleko zonyaka zizoya ngezidingo ezihlukile zenja yakho, izinhlobo ozithengayo, uhlobo lwecebo lomshuwalense olukhethiwe, nokuthi uyaqeqeshwa noma uqasha uchwepheshe.
Iphuzu eliyinhloko lapha ukuthi udinga ukuqonda ukuthi inja ayishibhile . Akuyona ithoyizi ongakhokha inani lokuqala bese uliyeka ligijime.
Inhliziyo yakho ingahle ilungele inja, kodwa ingabe isikhwama sakho semali sesilungile?
Ngaphambi kokwenza isinqumo, hlala phansi uhlele isabelomali sanyanga zonke ukulinganisa ukuthi uzodinga imali engakanani eyengeziwe ukuze unikeze iPit Bull ukunakekelwa okufanele nenduduzo.
Uma usesha abakhiqizi be-American Pit Bull Terrier online, uzosheshe uthole ukuthi kunezinqwaba ze-‘em. Nabafuyi abambalwa be-APBT ongabahlola:
Ama-Pitbulls amahle kakhulu enziwe (ETennessee)
Ipulazi lasePitbull laseMugleston (Oklahoma)
UTatonka Kennels (EFlorida)
Lolu hlobo lukuyo yonke indawo, naphezu kwesithunzi esingezansi, okwenza kube nzima ukuhlukanisa abalimi abahle kumaqanda amabi.
Ucwaningo oluphelele luyadingeka ukuthola i-puppy engcono kakhulu kuwe. Nge-Pit Bull, nakanjani ufuna ukubheka umfuyi onentshisekelo yalolu hlobo, abeke phambili ikhwalithi ngaphezu kobuningi.
Izigayo zemidlwane zidlangile, futhi ama-bozos aqhuba la mabhizinisi angenabuntu azosho noma enze noma yini edingekayo ukuze enze imali esheshayo. Ungahle uphethe umdlwane onegazi elibi, okusho ukuthi ujwayele izifo kanye nezinkinga zokuziphatha.
Uzokwazi ukuthi uthole umfuyi onesimilo uma…
Bayaziqhenya ngokuba yingxenye yomphakathi wamaPitty. Funa abalimi abangamalungu amakilabhu ezifuyo ahlonishwayo. Bazobhalisa nezinja zabo, bakhombise umthwalo nokuzibophezela ekugcineni izinga lokufuya.
Bafuna uhlangane nabazali. Bheka abazali bephuphu ukuqinisekisa impilo enhle kanye nama-bloodline aqinile. Ukuziphatha kwabazali bayo kusho okuningi ngobunono bomdlwane.
Bayakumema ukuba uvakashele kubo: Umfuyi oziphethe kahle ulangazelela ukuthi uvakashele izakhiwo lapho umdlwane uzalelwe futhi wakhulela khona. Ngaleyo ndlela, uthola amazwibela ezimo zekhaya lokuqala lomdlwane.
Bakhathazekile ngenhlalakahle yemidlwane yabo: Umfuyi kufanele ahlinzeke ngemvume yezempilo, izinkomba zezilwane, kanye nobufakazi obuvela kumakhasimende adlule. Bazophinde baxhumane ngemuva kokuthenga kokuqala ukuqinisekisa ukuthi isikhathi soguquko sihamba kahle.
Ukwamukelwa nokusindiswa kwe-American Pit Bull Terrier
Ngenxa yezigayo zemidlwane, ukulwa kwezinja nabanikazi abangakwazi ukusingatha umthwalo walolu hlobo, akumangazi ukuthi kunenqwaba yePit Bulls ephelela ezindaweni zokukhosela.
Uma ukutholwa kukhuphuka kakhulu ku-alley yakho, bheka lezi I-American Pit Bull Terrier iyasindisa.
I-Bad Rap (ECalifornia)
I-Rotta Love Plus (EMinnesota)
IPit Bull Rescue Central (EMissouri)
Ukuhlengwa kwabahlukumezi beBiggies (EPennsylvania)
Isisekelo Sokulima Kwezilwane (I-New York)
Izinja njenge-American Pit Bull Terrier
Ngemuva kokufunda lokhu, mhlawumbe ungaphetha ngokuthi iPit Bull akuyona eyakho. Kulungile! Lolu hlobo lolo oludingayo isikhathi esengeziwe nomthwalo wemfanelo.
Ungazizwa udangele! Kunezinye izinhlobo eziningi ezinokuncane kwePitty kuzo. Bheka lezi zingxube zePit Bull ezidumile:
Umxube we-Pit Bull Boxer
I-Pit Bull Chihuahua Mix
Umxube wePit Bull Husky
I-German Shepherd Pit Bull Mix
I-Pit Bull Lab Mix
I-Pitbull Mastiff Mix
I-Golden Retriever Pitbull Mix
Lokho ukugoqa! Manje njengoba usuyibhekisise kahle i-American Pit Bull Terrier, akunakuphikiswa ukuthi lolu wuhlobo lwempikiswano.
Kuthatha i- uhlobo olukhethekile lomnikazi wenja onentshisekelo nesikhathi sokunikeza iPittie uqeqesho oludingayo.
Lolu hlobo luphelele kumuntu othi ayisebenzi noma ukuhamba kakhulu.
Umnikazi ofanele wale nja angathatha isikhathi sokuphumula usuku ngalunye ukukhipha uPitty wabo ukuyozivocavoca.
Le nja iyanamathela kumnikazi wayo, futhi, ngakho-ke ayikwazi ukuma kude nomndeni wayo izinkathi ezinde yesikhathi.
Uma uhlala efulethini elincane edolobheni, iPittie ingahle ingalingani nawe. Njengoba iPit Bull ilingene ngamandla amakhulu, a indlu enegceke zivumelana nezidingo zakhe ezisebenzayo.
Ekugcineni, udinga ukubekezela, ungaguquguquki, futhi uzinikele ekuqeqesheni. I-Pit Bull idinga umnikazi ongasebenza njenge i-alpha yepakethe ukuqeda inkani nolaka.
Ucabangani nge-American Pit Bull Terrier? Sitshele kumazwana!
ISloughi: Ngabe ijubane nobuhle kwenza isilwane esihle?
i-bichon ne-toy poodle mix
labrador retriever igolide retriever mix imidlwane